Izinto ezili-12 ekufuneka uzenzile emva kokubhala iposti yebhlog
Uluhlu lwakho lokuPhakanyiswa kweBlog
NgoMgqibelo, Disemba 22, 2012 Douglas Karr
Sibhale inqaku elineenkcukacha ngendlela yokwenza Lungiselela iposti yakho yebhlog elandelayo. lo infographic evela kwiDivvyHQ, isicelo sekhalenda sokuhlela sasimahla, uhamba ngamanyathelo athile ukukhuthaza umxholo wakho emva kokupapashwa.
Ekuphela kwento endithandabuzayo kukucela ezinye iibhlog ukuba zikhuthaze umxholo wakho. Ukuba ubhala umxholo omkhulu, ezinye iibhlog ngeke yabelana ngayo… Ndiva ngathi kukrwada ukubuza nje. Ndingabuyisela le nto nge Unyuso oluhlawulelweyo. Sebenzisa ii-StumbleUpon Ads, Outbrain, okanye enye inkqubo inokufumana umxholo wakho kwaye wabelwe.
tags: Ukunyuswa kweposti yebhlogukukhuthazwa kweblogikhuthaza iposti yebhlogkhuthaza iposti yakho yebhlog
Imeko yezeNtlalontle ka-2012
Idatha egqibeleleyo ayinakwenzeka
Nov 17, 2016 ngo-10:40 PM
Ngaba ikho indlela yokuprinta lo mzobo? Ndingathanda ukuyigcina ikufutshane xa ndiposa.
Nov 19, 2016 ngo-9:47 PM
Mhlawumbi uprinta nje i umzobo wokwenyani, emva koko CTRL-P ukuprinta! Ndenze ikhonkco apho ukuze ndiyivule kwifestile entsha.